खबरदार ओली सरकार, फेरि नाकावन्दी गर्न नपरोस ! गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्ताखबरदार ओली सरकार, फेरि नाकावन्दी गर्न नपरोस ! खबरदार ओली सरकार, फेरि नाकावन्दी गर्न नपरोस ! Written by Yatra Daily
Monday, 16 May 2016 17:57	Rate this item
विभिन्न माग राखि मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठवन्धनले राजधानी कन्द्रित आन्दोलन जारी राखेको छ । आन्दोलनको अन्तिरम चरण अन्तरगत आइतबार सिंहदरवार घेराउ जारी छ । गठवन्धनमा रहेका राजनितिक दलका शीर्ष नेताहरुले फरक-फरक ठाउँमा सिंहदरबार लक्षित धर्नाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अनामनगर हनुमाथानस्थित भाटभटेनी अगाडि सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पलेटी कसेर धर्नामा बसिरहेका थिए । कार्यकर्ताहरुले नारा लगाए पनि उनी चुपचाप देखिन्थे । त्यही वीचमा सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसग लिइएको अन्तरवार्ताको सम्पादित असं :
हामी सार्थक वार्ताको लागि संधै तयार छौं । तर अहिलेको सरकार वार्ता पनि गर्न चाहँदैन । अधिकार दिन पनि खोज्दैन । सरकार अहिले पनि अधिकार दिन खोजिरहेको छैन । वार्ताको लागि आवश्यक वातावरण पनि तयार छैन । कसरी कुरा मिल्छ ? वार्ताको लागि सरकारले पत्रै पठाएको थियो । तपार्इंहरु आफैं जानु भएन, कसरी वार्ता हुन्छ त ?
भोली पनि यहि सिंहदरवार घेराउ नै हुन्छ । त्यतिबेलासम्म हाम्रो कुरा सुनेन भने फेरी बैठक बसेर आन्दोलनको नयाँ स्वरुप तयार पार्छौं । तर काठमाडौंबाट अधिकार नलिर्इ फर्किंदैनौं । साभार : अनलाइनखबर Read 700 times	Tweet
« स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने गरी कर र राजस्वका प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्छ,रवीन्द्रकुमार बरनवाल सरकारी नीति ठीक भए प्लाष्टिक उद्योगले निकासी गर्न सक्छ दीपककुमार टिबडेवाल प्रबन्ध निर्देशक, पैकवेल इण्डष्ट्रिज »